यी हुन् संसारका १० घातक रोग, यस्ता छन् लक्षण र बच्ने तरिका - ज्ञानविज्ञान
भनिन्छ ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ त्यसकारण मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जागरुक हुनैपर्छ । आफ्नो शरिरलाई राम्रोसँग बुझ्नसके रोग लाग्नुपूर्व नै रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ । आज हामी तपाईंलाई यस्ता १० रोगबारे बताउँदैछौं जसबाट संसारको धेरैजसो जनसंख्या प्रभावित छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारका १० घातक रोगबारे जानकारी दिएको छ, जसबारे यहाँ कुरा गरिएको छ ।
१. कोरोनरी आर्टरी डिजिज (मुटु रोग):
अहिलेको अवस्थामा संसारको सबैभन्दा घातक रोग कोरोनरी आर्टरी डिजिज हो जसका कारण सन् २०१५ मा संसारभरीका ८८ लाखको मृत्यु भएको थियो । संसारभरीका १५.५ प्रतिशत मानिसहरुको मृत्युमा यही रोग जिम्मेवार छ । सन् २००० मा यो रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६० लाख थियो जुन सन् २०१५ सम्म बढेर ८८ लाख पुगेको छ । मुटुसम्म रगत पुग्ने रक्तनली संकुचित भएपछि छाती दुख्ने र हार्टफेल हुनेलगायतका समस्यालाई कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनिन्छ ।
कोरोनरी आर्टरी डिजिजका कारक तत्वः
२. ब्रेन स्ट्रोकः
सबैभन्दा घातक रोगको सूचीको दोस्रो नम्बरमा छ, ब्रेन स्ट्रोक जसका कारण सन् २०१५ मा ६२ लाखको मृत्यु भएको थियो भने संसारभरी भएको मृत्युमा ११.१ प्रतिशत मृत्यु यो रोगका कारण भयो । स्ट्रोक त्यतिबेला हुन्छ जब मस्तिष्कको कुनै धमनी कि त ब्लक हुन्छ कि त लिक । यस्तोमा ब्रेन सेल्सले अक्सिजन पाउँदैन र केही मिनेटभित्रै बिरामीको ब्रेन डेड हुने गर्दछ । स्ट्रोकको क्रममा बिरामी अचानक संवेदनशून्य हुने गर्दछ । बिरामीलाई हेर्न र हिँड्न समस्या हुनथाल्छ ।
श्वास सम्बन्धि संक्रमणका कारण सन् २०१५ मा ३२ लाखको मृत्यु भएको थियो । यद्यपी, सन् २००० सँग तुलना गर्ने हो भने यो रोगमा कमी आएको छ । सन् २००० मा जहाँ श्वास सम्बन्धि संक्रमणबाट ३४ लाखको मृत्यु भएको थियो । यस्तै सन् २०१५ मा यो संख्या घटेर ३२ लाख भएको छ । यो संक्रमणले हाम्रो शरिरको वायु मार्ग र फोक्सोलाई प्रभावित गर्दछ जसका कारण फ्लू, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस र टिबीसम्म हुनसक्छ ।
हरेक वर्ष फ्लूको सूई लगाउनुहोस्, नियमित रुपमा साबुन–पानीले हात धुनुहोस्, यदि संक्रमण भए घरमा आराम गर्नुहोस् ।
४. क्रोनिक अब्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजिजः
यो फोक्सोसँग सम्बन्धित दीर्घ रोग हो जसका कारण सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । यो रोग दुई प्रकारका छन् – क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र इन्फिसेमा । सन् २००४ मा संसारभरीका ६ करोड ४१ लाख मानिस यो रोगबाट ग्रसित थिए जबकी सन् २०१५ मा करिब ३१ लाख मानिसहरुको यो रोगबाट मृत्यु भएको छ । सन् २०१५ मा संसारभरीका ५.६ प्रतिशत मानिसहरुको यो रोगका कारण मृत्यु भएको थियो ।
५. श्वास सम्बन्धि क्यान्सरः
८. निर्जलीकरण वा झाडाः
१०. लिभर सिरोसिसः
Don't Miss it म:म खानु शरीरका कति लागि खतरनाक ??
Up Next छालामा भएको मुसाले हुन सक्छ क्यान्सर
के हो हर्निया ? छालाबाहिर मांसपेशीको थुम्को देखिने या हाम्रो शरीरका केही अंग सतहभन्दा माथि उठ्ने समस्यालाई नै हर्निया भनिन्छ…
निरोगी बन्ने १३ तरिका
स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो । त्यसैले अन्य कुरामा भन्दा पहिले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि केही त्याग र केही…
यदि तपाईं पनि छिनछिनमा सेल्फी खिच्नुहुन्छ भने तपाईं अब सावधान हुने बेला आएको छ किनभने तपाईंको यो शौखले तपाईंलाई समस्यामा…
यस्ता छन्, चाया हटाउने घरेलु तरिका
-करिव ५ वटा कागती काटेर २ लीटर पानीमा उमाल्नुस र चिसो भइसकेपछि कपाल धुनुस तपाईको कपालमा रहेको चाया छिटै हटेर…
विहेपछि दुलाहाले आफ्नो घर छाडेर दुलहीको घरमा किन जाँदेनन् ? जान्नुहोस
स्त्रीको देवी रुप एक अर्को वैदिक तथ्यका अनुसार स्त्रीलाई ‘देवी’ को रुप मानिन्छ । बिवाह वन्धनमा बाँधिएपछि उनी आफ्नो पतिको…